Activities Plan » Technological University (Monywa)
The Engineering subjects_ Civil, EC, EP, IT, Mechanical, MC and Textile are taught at the Technological University (Monywa).
– Holding English essay and debate competitions and Myanmar essay and poem ones as the remembrance of the independence day in order to flourish the sense of union spirit.
– Holding Fusel football match at the township playground in the rainy season.
– Putting the memorial wreath down at the monument and bow to it as the commemoration of the Martyr’s Day.
-Holding Ka-Htain festival in the period of Ta-Saung-Mone.
The following associations and society are organized in the Technological University (Monywa).
– Buddhist Association (started to organize in 2011)
– Red Cross society (started to organize on 1st January, 2013)
Sport groups are also organized in the Technological University (Monywa). The matches of football, Volleyball, mini-marathon and Lwun-Sawe will be held for student.
There arealot of tent books, thesis research papers and books for knowledge and pleasure in the library. Moreover, seven computers connected with Internet are installed for students the relative subject easily.
နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မုံရွာ)တွင် သင်ကြားပို့ချလျက်ရှိသော အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ် များမှာ မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်များ ၊ လျှပ်စစ်ဆက်သွယ်ရေးအင်ဂျင်နီယာ ဘာသာရပ်များ၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာ ဘာသာရပ်များ၊ သုတနည်းပညာအင်ဂျင်နီယာ ဘာသာရပ်များ၊ စက်မှုအင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်များ၊ မက္ကထရောနစ် အင်ဂျင်နီယာ ဘာသာရပ်နှင့် ချည်မျှင်နှင့် အထည် အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ် များဖြစ်ပါသည်။
မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာကျောင်းသားများ လက်တွေ့ကွင်းဆင်း ဆောင်ရွက်နေပုံ
Electronic and Communication ကျောင်းသူ/သားများ လက်တွေ့ဆောင်ရွက်နေပုံ
Electrical Power ကျောင်းသူ/သားများ လက်တွေ့ဆောင်ရွက်နေပုံ
IT ကျောင်းသူ/သားများ လက်တွေ့ဆောင်ရွက်နေပုံ
Mechanical ကျောင်းသူ/သားများ လက်တွေ့ဆောင်ရွက်နေပုံ
Textile ကျောင်းသူ/သားများ လက်တွေ့ဆောင်ရွက်နေပုံ
– မိုးရာသီအမျိုးသားဖူဆယ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲအား မြို့နယ်အားကစားကွင်းတွင်ကျင်းပခြင်း။
– အာဇာနည်နေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် အာဇာနည်ကျောက်တိုင်တွင် လွမ်းသူပန်းခွေချခြင်း၊ အလေးပြုခြင်း။
– ဝါတွင်းကာလတွင် ဝါဆိုသင်္ကန်းများ ကပ်လှူပူဇော်ပွဲကျင်းပခြင်း။
– တန်ဆောင်းမုန်းလတွင် ဆရာ/မ များနှင့် ကျောင်းသူ/သား များ စုပေါင်း၍ ဘုံကထိန်ပွဲကျင်းပခြင်း။
နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မုံရွာ)အနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါအသင်းအဖွဲ့များအား ဖွဲ့စည်းထား ရှိပါသည်။
– ဗုဒ္ဓဘာသာအသင်း (၂၀၁၁ခုနှစ်စတင်ဖွဲ့စည်း)
– ကြက်ခြေနီအသင်း (၁.၁.၂၀၁၃စတင်ဖွဲ့စည်း)
(ဃ) အားကစားဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့များ ၊ အားကစားအမျိုးအစားနှင့် ပွဲစဉ်များ နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မုံရွာ)အနေဖြင့် အားကစားအသင်းများဖွဲ့စည်း၍ ဆောင်ရွက်ထား ရှိပါသည်။ ကျောင်းသားများအား မိုးရာသီအမျိုးသားဘောလုံးပြိုင်ပွဲများ ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး ဘော်လီဘော ပြိုင်ပွဲများ၊ မီနီ မာရသွန် ပြိုင်ပွဲများ၊ လွန်ဆွဲ ပြိုင်ပွဲများ ကျင်းပပါသည်။
နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မုံရွာ)ရှိ ကျောင်းစာကြည်တိုက်တွင် ပြဌာန်းစာအုပ်များ၊ သုတ၊ ရသဆိုင်ရာစာအုပ်များ၊ သုတေသနနှင့်ဆိုင် စာတမ်းများကိုထားရှိပါသည်။ ထို့အပြင် ကျောင်း သား၊ ကျောင်းသူများ စာရှာဖွေရာ၌လွယ်ကူစေရန် Computer(၇)လုံးအား Internet ချိတ်ဆက်၍ ထားရှိပါသည်။